China Isipikha seBluetooth 2.1 Isiteshi NV-8945 abakhiqizi nabaphakeli | YIWU
Bukudlala 18650 * 8000 mA
I-Min Order / Ctn 24
Ukuxhumeka okulula nezwi elisobala:Isipikha se-Bluetooth singaxhuma ne-tablet, mp3, mp4 namanye amadivayisi okungewona awe-Bluetooth; futhi ifakwe umbhobho nentambo yokuxhuma, inganikeza umsindo ocacile futhi onomsindo emakilasini, engqungqutheleni, emaphathini noma eminye imibuthano yangaphandle.
Umsindo we-True Wireless Stereo Onamandla:Bhangqa kalula izipikha ezimbili eziphathwayo, ukudala iziteshi ezingakwesokunxele nangakwesokudla. isipikha esiphathekayo siletha umsindo empilweni ukuze kube nokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu komsindo
I-10m Bluetooth Range: Dlala izipikha zeBluetooth kuze kufike ku-10m kude nedivayisi yakho; ukwakhiwa kwe-antenna okuthuthukile nge-Bluetooth 4.2 kunikela ngobubanzi obukhulu obungenantambo nokuxhumeka kwe-Bluetooth okusheshayo; ixhuma kalula ne-Echo Dot, i-Echo Dot 3rd Gen, i-Echo, i-Echo Plus, i-iPhone 6, i-iPhone 7, i-iPhone 8, i-iPhone X, i-iPad, i-Samsung Galaxy 8, i-Samsung Galaxy 9, i-Samsung Note, i-Smartphone, i-Cellphone, i-Laptop, ikhompyutha, IMac, nawo wonke amanye amadivayisi we-Bluetooth.
Amatebhe amaningi:I-Bluetooth eyakhelwe ngaphakathi enebanga elikhulu lokusebenza; ukuxhumana okulula nekhadi le-TF / USB nomsakazo we-FM ukuze ukwazi ukujabulela izingoma ezikumakhadi noma ulalele umsakazo noma kuphi ngesipika.
Umsebenzi: Isiteshi se-2.1, imodi yengoma ye-K, i-Bluetooth / TF / i-USB / i-AUX /, i-home KTV (imbobo ye-MIC), eyakhelwe ngaphakathi ku-18650 * 8000 mAh lithium battery, ukudlala okude, okuphathekayo, ukubonisa, imarquee, izipikha ezi-2 * 78MM-intshi, amandla : 2 * 10W, izipikha, ama-diaphragms ama-2, ukuphindaphinda okwenziwe ngamagama okuguquguqukayo.
Lalela umculo isikhathi eside:Ngenxa yebhethri laso elishajekayo elakhelwe ngaphakathi, lesi sipikha sangaphandle esingenantambo singaletha amahora afinyelela kwangu-12 esikhathi sokudlala. Ngale ndlela, ungalalela uhlu lwakho lwadlalwayo oluthandayo amahora ngaphandle kokukhathazeka ukuthi isipikha sizophelelwa ibhethri. Ukuze ukhokhise, mane usebenzise ikhebula le-USB elifakiwe.
1 x Imakrofoni enentambo
Langaphambilini Isitayela se-Game Headset Neck-Bluetooth NV-8118
Olandelayo: I-Bluetooth Somlomo Umndeni ktv NV-8942
Ishaja ye-Apple Car, Amahedisethi NgeMic, Ikhebula Leshaja Lefoni, Izandla Amahedsethi, Ama-earphone angenantambo, Ama-headphone we-Bluetooth ane-Mic,